प्रदेश Archives - Page 52 of 79 - सिधा दृष्टी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले विश्वरभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न पुनः आग्रह गरेका हुन ।
आइतबार देखि काठमाडौंमा शुरु भएको ‘इन्डिया नेपाल लजिस्टिक समिट’ एक कार्याक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनी,
धादिङमा गाडी दुर्घटनामा हुँदा एकजनाको मृत्यु, एक घाइते
धादिङ । थाक्रे गाउँपालिका–८ त्रिभुवन राजपथमा शनिबार राति भएको सवारी दुर्घटनामा एक सवारी चालकको मृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुनेमा वडा नम्बर ६ का २८ वर्षीय बलराम तामाङ रहेको प्रहरी%
कर्मचारीले मदिरा सेवन गरे बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग
कठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले कार्यालय समयमा मदिरा सेवन गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । काँग्रेस सांसद कँडेलले कार्यालय समयमा मदिरा
एक महिनामै रु. ५३ लाख राजश्व सङ्कलन
काठमाण्डौ । चीनसँग सीमा जोडिने सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट करिब एक महिनामा ५३ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । २०७२ सालको भूकम्प गए पछि बन्द भएको तातोपानी नाका जेठ १५ बाट सञ्चालनमा आएको
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को हवाई महानिर्देशकहरुको सम्मेलन राजधानी काठमाण्डौमा हुने भएको छ । आगामी भदौँ २ देखि ६ गते काठमाडौँमा सम्मेलन गरिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)